Gudoomiye ku xigeenkii hore ee degmada Xamar Jajab oo ku dhaawacmay qarax gaari – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Gudoomiye ku xigeenkii hore ee degmada Xamar Jajab oo ku dhaawacmay qarax gaari
A warsame 19 May 2014 4 April 2019
Muqdisho – Mareeg.com: Guddoomiye ku-xigeenki hore amniga iyo siyaasadda ee degmada Xamar Jajab, Faarax Daahir Jimcaale ayaa ku dhaawacmay qarax loogu soo xiray gaari uu watay, iyadoo qaraxaasi uu ka dhacay xaafada Via Roma ee degmada Xamar Weyne.
Guddoomiyaha Degmada Xamar weyne, Cabdiqaadir Maxamed Cabdiqaadir ayaa sheegay in Faarax ay geeyeen isbitaalka Madiina halkaasi oo lagu dabiibayo xaaladiisa, waxaana uu guddoomiyuhu intaa ku daray inaysan jirin cid kale oo wax ku noqotay qaraxa lala bartilmaameedsaday guddoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada Xamar Jajab.
Cabdiqaadir Maxamed Cabdiqaadira ayaa xusay in qaraxa uu ahaa mid gaariga loogu soo xiray, isagoo intaa ku daray in xaaladda degmada ay iminka ku soo laabatay caadigeeda.
Maanta ayaa waxaa bam lagu tuuray gaarigiisa ka badbaaday gudoomiye ku xigeenka Amaanka iyo siyaasadda degmada Hiliwaa Abshir Gaarane.
Alshabaab ayaa horay ugu hanjabay iney beegsan doonaan xubnaha cusub ee maamulka degmooyinka gobolka Banaadir iyo kuwii xilalka laga qaaqay, waxeyna qarx ku dileen xoghayihii hore ee maamulka gobolka Banaadir Cabdi-kaafi Hilowle Cusmaan.
TERRORISM: UN BANS VISITORS FROM ITS NAIROBI OFFICE
Erdogan: Turkey strong enough to help both Soma and Somalia